Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-2 enep - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-2 enep
Igumbi elise- indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguAndreas
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enomntu oncedisayo epheleleyo nenendawo yokuhlala yabucala enepuli esetyenziswa nangabanye abantu kunye nomgangatho welanga, kuquka ukucoca yonke imihla. Iflethi inamagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlambela elineshawa eshushu kunye nendawo yokuphumla, ikhitshi elinepleyiti eshushu kunye nebhalkhoni ejonge ipuli kunye neChaweng Lake. Iflethi ikwinqanaba eliphezulu yaye ilibona kakuhle ichibi kunye neentaba.
Ifumaneka kumgama weekhilomitha eziyi-1 kuphela ukusuka elunxwemeni lweChaweng, ubomi basebusuku kunye ne-Central Festival Shopping mall okwangoku kwindawo ethe cwaka
Siyintsapho encinci ebaleka izindlu ezinomntu oncedisayo, iiflethi nezindlu ezinendawo yokuphola ezikwicomplex ezikwi-oasis esecaleni kweentaba ezikumgama oziikhilomitha eziyi-1 kuphela ukusuka eChaweng Beach nakwindawo eneevenkile zokutyela, iibhari kunye nobomi basebusuku.
Sikhangele phambili ekukwamkeleni njengondwendwe(iindwendwe) lwethu.
Kukho iTempile entle yaseBuddist encotsheni yenduli yethu enombono omangalisayo we-360 degree.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enomntu oncedisayo epheleleyo nenendawo yokuhlala yabucala enepuli esetyenziswa nangabanye abantu kunye nomgangatho welanga, kuquka ukucoca yonke imihla. Iflethi inamagumbi okulala amabini, igumbi lokuhlambela elineshawa eshushu kunye nendawo yokuphumla, ikhitshi elinepleyiti eshushu kunye nebhalkhoni ejonge ipuli kunye neChaweng Lake. Iflethi ikwinqanaba eliphezulu yaye ilibona kakuh…
4.86 (iingxelo zokuhlola 14)
Kuthe cwaka kakhulu apha kodwa kukufutshane neziko. Iivillas zam, izindlu kunye namagumbi akwindlela encinci yabucala ephela ngasemva kweevillas ezi-2 emva kokuhlala ukuze kungabikho traffic ingako kwaphela.
Siyakonwabela ukudibana kunye nokulungiselela iindwendwe/abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela. Abasebenzi bam beendwendwe kunye nam siyafumaneka kwiindwendwe zethu ukuqinisekisa ukuba bazakuba neholide entle kwaye bahlale apha.
Ngokuqhelekileyo sinabasebenzi kwindawo yolwamkelo kodwa ngenxa ye-Covid inkosikazi yam uNoi kunye nam sikhathalela zonke iindwendwe ngokobuqu kwaye ndiyafumaneka kwiindwendwe nangaliphi na ixesha ukuba zifunwa ngefowuni okanye nawuphi na umthunywa. Sihlala kwimizuzu emi-5 kuphela.
Sinethemba lokunceda zonke iindwendwe zethu ukuba zibenendawo entle yokuhlala kwaye siyakuthumelela uluhlu lweendawo ezishushu kunye nemisebenzi ngokukhawuleza nje ukuba ubhukishe.
Ngenxa ye-Covid sinikezela ngonxibelelwano oluncinci lokungena kwiindwendwe ezikhetha ukunxibelelana kuphela ngumthunywa ngaphandle kokudibana nomntu.
Siyakonwabela ukudibana kunye nokulungiselela iindwendwe/abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela. Abasebenzi bam beendwendwe kunye nam siyafumaneka kwiindwendwe zethu ukuqinisekis…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ko Samui